Vaovao - Ny valin'ny antso nasionaly, TMTeck dia asaina hanatrika ny fihaonana an-tampon'ny fandraharahana any Alibaba
Valin'ny fiantsoana marika nasionaly, TMTeck dia asaina hanatrika ny fihaonana an-tampon'ny fandraharahana any alibaba
Ho valin'ny fiantsoana marika nasionaly, manangana marika nasionaly ary manefy ny herin'i Shina, Alibaba, izay sehatra e-varotra e-varotra lehibe indrindra manerantany tamin'ny 10 Mey, dia nikarakara fihaonambe an-tampon'ny orinasa Beijing mety tao amin'ny efitrano fivorian'ny taonjato Beijing, ary Masters Lanonana fanokafana. Amin'ny maha solontenan'ny marika ny fitaovana fitiliana tsy miteraka famokarana ao amin'ny orinasam-pamokarana sinoa, dia asaina hanatrika ny fivoriana ny TMTbra. Ity hetsika ity dia hahatonga ny orinasam-panondranana ho lehibe sy matanjaka kokoa, avelao ny marika sinoa sy ny vokatra sinoa hamidy amin'ny firenena sy faritra maro kokoa amin'ny lohahevitra momba ny marketing amin'ny tamba-jotra, ho an'ny raharaham-bahiny amin'ny ho avy. Manomeza hevitra vaovao sy fomba vaovao.
Tamin'ny taona 2018, nanararaotra ny toe-javatra ny e-commerce cross-border, tonga tamim-pahanginana ny vanim-potoana niampitana ny data, ny teknolojia vaovao sy ny teboka fanombohana, ny fotoana sy ny fanamby miaraka, ny vanimpotoana manjonoana manjono dia lasa lasa taloha. Ny fahombiazan'ny famatsian-tsolika dia mpanjaka, ny sisin-tany vaovao dia hamirapiratra ny vanim-potoanan'ny e-varotra. Ireo mpandray anjara dia hizara ny traikefany amin'ny varotra ivelany ho an'ny indostrian'ny tsirairay avy, handinika ny toetra mampiavaka ny tsena isam-paritra, hampiasa tsara ny tsirairay ary hamorona vokatra tsara .Nijery ny firafitry ny tsena iraisam-pirenena ankehitriny, ny mpanjifa avy amin'ny faritra samihafa dia samy manana ny mampiavaka azy ireo. Ireo mpandray anjara tamin'ny kaonferansa dia nizara lohahevitra maro momba ny fomba hahitana mpanjifa, ny fomba fananganana ny fahatokisan'ny mpanjifany, ary ny fomba fananganana ekipa mpivarotra raharaham-bahiny matihanina. . Ny mpandray anjara tsirairay dia nahazo tombony betsaka.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana sy ny fampiharana betsaka ny teknolojia fampahalalana elektronika, niditra tamin'ny vanim-potoana vaovao ihany koa ny varotra ivelany. Noho izany, zava-dehibe indrindra ny fahazoana ny lamina ara-barotra amin'ny sehatra e-varotra miampita sisin-tany sy ny fomba fampitomboana ny fiparitahan'ny vokatra platform. Ankoatr'izay, ny tolo-kevitry ny politika "Belt and Road" amin'ny vanim-potoana vaovao dia hanampy amin'ny famoronana lamina iray vaovao amin'ny fisokafan'ny tontolon'i Shina amin'ny tontolo ivelany ary manangana lamina vaovao ho an'ny fiarahamonina misy ifandraisany sy mifanasoa. Ny lahasa ifotony amin'ny fananganana ny "Belt and Road" dia ny fampiroboroboana ny toekarena, sy ny fanamafisana ary ny fanitarana ny toe-javatra izay misokatra mifanatrika amin'i Sina, Azia Afovoany, Azia atsimo atsinanana, ary ireo firenena sy faritra hafa eny an-dalana, ary mampivelatra ny fiaraha-miasa misy ifandraisany mahasoa mba hamoronana tontolon'ny fifaninanana tsena sy ara-drariny ary hampiroborobo ny karazana. manitatra ny refy sy ny habetsaky ny fampandrosoana ara-toekarena, manatsara ny firafitry ny toekarena ary manome tombony ho an'ny vahoaka any amin'ny firenena rehetra eny an-dàlana. c safidin'i Shina hifindra amin'ny firenena toekarena lehibe mankany amin'ny fahefana ara-toekarena, avy amin'ny firenena mpivarotra lehibe mankany amin'ny firenena mpivarotra matanjaka, ary manan-danja stratejika lehibe amin'ny vanim-potoana vaovao. Tmteck dia hamaly tsara hatrany ny politikam-pirenena, miaraka amin'ny fanampian'ny sehatra varotra ivelany, hanaraka ny fanavaozana ny vokatra, hanatratra marika nasionaly, ary hamorona famirapiratana vaovao amin'ny orinasa iraisam-pirenena.
Fotoana fandefasana: Des-17-2020
Ut Block Block, Calibration Blocks, Bara fanamafisana ultrasonika, Pipa fanamafisam-peo, Calibration Test Block, Telegrama ultrason transducer,